Nanafatra fiaramanidina Airbus A10XLR 321 an'ny kaompaniam-pitaterana fiaramanidina silan'i Shily
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Nanafatra fiaramanidina Airbus A10XLR 321 an'ny kaompaniam-pitaterana fiaramanidina silan'i Shily
SKY, mpitatitra entana lafo vidy any Shily, dia nanao sonia ny Fifanarahana mividy miaraka amin'ny Airbus ho an'ny 10 A321XLR. Hanitatra ny tamba-jotra iraisam-pirenena amin'ny zotram-piaramanidina vaovao ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka.
Ny A321XLR no dingana manaraka amin'ny fivoarana ao amin'ny A320neo / A321neo Family, mahafeno ny fepetra takian'ny tsena amin'ny fampitomboana ny halaviran-karama sy ny karama amin'ny fiaramanidina tokana. Ny A321XLR dia hanolotra zotram-piaramanidina tery tsy dia nisy toa azy hatramin'ny 4,700nm, miaraka amin'ny 30 isan-jato ny fanjifana solika isaky ny seza raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina mpifaninana tamin'ny lasa, izay ahafahan'ny zotram-pitondrana manitatra tamba-jotra amin'ny alàlan'ny fanaovana làlana vaovao mahomby kokoa.
“Ity fiaramanidina fiaramanidina vaovao ity dia hahafahantsika manitatra ny tolotra ataonay lalam-pirenena sy lavitra, eo ambanin'ny maodelin'ny vidiny ambany mahomby sy ny vidin'ny tapakila mety indrindra aminy. Ankehitriny ny mpandeha dia afaka mankafy toerana vaovao sy tena manintona amin'ny fiaramanidina maoderina indrindra eny an-tsena, "hoy i Holger Paulmann, tale jeneralin'ny SKY.
Arturo Barreira, filohan'ny Airbus Latin America dia nilaza fa: "Faly izahay fa nifidy ny A321XLR ny SKY mba hanitatra bebe kokoa ny fiaramanidin'ny Airbus rehetra. Ny A321XLR dia hamela ny SKY hanolotra toerana vaovao ho an'ny mpanjifany, toy ny sidina mivantana avy any Santiago any Chile mankany Miami any Etazonia ”
Raha ny filazan'ny Airbus Global Market Forecast (GMF) farany dia mila fiaramanidina vaovao miisa 2,700 20 i Amerika Latina ao anatin'ny 2002 taona ho avy, mihoatra ny avo roa heny amin'ny andian-tsambo ankehitriny. Ny fifamoivoizan'ny mpandeha any Amerika Latina dia nitombo avo roa heny hatramin'ny 0.89 ary antenaina hitohy hitombo mandritra ny roapolo taona ho avy. Manokana any Shily, ny fivezivezena dia antenaina hitombo hatramin'ny 2.26 dia isaky ny kapita ka hatramin'ny 2038 dia amin'ny XNUMX
Mifanaraka amin'ireo andian-tsambo mitombo, araka ny GMF farany an'ny Airbus dia ilaina ny mila mpanamory fiaramanidina vaovao 47,550 sy teknisiana 64,160 hofanina mandritra ny 20 taona ho avy any Amerika Latina. Mba hanomezana fahafaham-po an'io filàna io dia nofidian'ny SKY ihany koa ny Airbus ho mpanome tolotra fiaramanidina, nahatonga ny zotram-piaramanidina ho mpanjifa fandefasana ny Airbus Chile Training Center. Hanolotra fiofanana ho an'ny ekipa mpanamory fiaramanidina ho an'ny mpanamory fiaramanidina shiliana ity ivon-toerana ity ary hanisy simulator A320 feno sidina.
SKY dia mpanjifa Airbus nanomboka tamin'ny 2010 ary lasa mpandraharaha Airbus rehetra tamin'ny taona 2013. Ny fiaramanidina misy ny fiaramanidina 23 A320 Family dia manompo amin'ny zotram-pirenena sy iraisam-pirenena mampifandray an'i Chile amin'i Arzantina, Brezila, Peroa ary Uruguay.
Ny Airbus dia nivarotra fiaramanidina 1,200 600, manana backlog mihoatra ny 700 ary mihoatra ny 60 miasa manerana an'i Amerika Latina sy Karaiba, maneho ny tsenan'ny tsenan'ny 1994 isan-jaton'ny andiam-piasana miasa. Hatramin'ny 70, Airbus dia niantoka efa ho XNUMX isan-jaton'ny kaomandy netina ao amin'io faritra io.
Misokatra ho an'ny fizahantany ny nosy natiora taorian'ny fifidianana ankapobeny nataon'i Dominica
Mampiditra hetra vaovao momba ny fizahan-tany i Tiorkia